Xirirka Kubadda Cagta Puntland oo Kajawaabay eedayn loo Jeediyeey (dhegayso) – Radio Daljir
Siteenbar 20, 2017 9:15 b 0
Xiriirka kubadda cagta Puntland ayaa dhawaan ku shaaciyay warqad qoraal ah oo ay soo saareen inay kubadda cagta Puntland ay ka ganaaxeeen Macallinka kooxda kubadda cagta Garoowe City.
Tababarahaan ayaa ganaaxiisa waxaa xiriirku u mareen sida ku cadayday warqada ay soo saareen inuu ku kacay falal anshaxa ciyaaraha ka baxsan.
Haddaba si aan waxbadana oga -ogaano ayaan waxaan wax ka weydiinay arrintaasi Macallin Maxamed Cabdi Xasan Bille ,waxaana uu idaacadda daljir u sheegay inuusan sharci ahayn ganaaxa la saaray ,maadama aan loo marin sifo sharci ah .
Macallinka kooxda Kubadda cagta Maxamed Cabdi Xasan (Bille) ayaa dhanka kale ku eedeyay xiriirka kubadda cagta Puntland iyo Guddoomiye kuxigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya inay ku kaceen musuq maasuq baahsan intii uu socday koobkii kooxaha heerka koowaad ee Puntland iyagoo u kala eexday kooxaha qaarkood sida uu hadalka u dhigay.
dhegayso Codka Macalinka
Waxaan la xiriirnay si aan arrintaas wax uga weydiino Xoghayaha xiriirka kubbadda cagta Puntland Cabdulqaadir Cali Juula ayaa beeniyay eedaymaha loo soo jeediyay xiriirka ,waxaana uu sheegay in uu san wax fara gellin ah ku yeelan xiriirka Soomaaliya Horyaalkii Puntland ee soo dhammaaday .
Cabdulqaadir waxaa uu sidoo kale tilmaamay in si guul ah uu kusoo dhammaaday horyaalkii kubbadda cagta Puntland/
dhegayso codka Julaa
Taliyaha Qeybta Gobalka Mudug ” Galmudug Jidkay u Gashay Dad Shacab ah Sadex Qof Ayeey Dishay Gaarigina way Gubtay ”(dhegayso)